Imibongo yokwenza umhlobo athandane ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Andiqinisekanga ukuba ndithini kuye? Ngaba akukho magama ukubonisa uthando lwakho, uxabiso okanye uthando?
Kubalulekile ukuba nayiphi na indoda ibonakalise uthando lwayo kumfazi ayithandayo kakhulu. Ukukhuphela esi sicelo uyakufumana izivakalisi ezifutshane, eziphakathi okanye ezide ofuna ukuzenza ukuze uveze indlela oziva ngayo kwelo bhinqa ulithandayo kakhulu. Ungaphoswa leli thuba lokubonisa uthando lwakho kuloo mhlobo okanye kumfazi olangazelela ukuba kunye naye. Yimangalise kwaye ngokuqinisekileyo iya kuvuya nawe.
1 Imibongo yokwenza umhlobo abe luthando
1.1 Iwele kuwe
1.2 Imibongo yothando
1.3 Kutheni ndikhethe wena
1.4 Xa uthando luqala
1.5 Ukususela xa uhleka kude kube xa unomsindo
1.6 Ndabelana nawe
1.7 Hlala apha
2 Iividiyo zemibongo zokwenza umhlobo athande uthando
Ndizimamele iingxaki zakho
Ndizosula iinyembezi zakho
Ndikuthanda ngentliziyo yam yonke,
kwaye luloyiko lwam olukhulu olo.
Andikwazi ukukukhupha entlokweni yam,
Naphi na apho ndijonga khona
Ukhona xa ndizokulala
Ukhona xa ndivuka
awuyi kushiya amehlo am.
Uhlala usengqondweni yam
Kwaye uyithimbile intliziyo yam
Kwaye andikaze ndifune ukwahlukana
Nangona kunjalo ndidlala umdlalo
Njengoko ungumhlobo wam osenyongweni,
kwaye ukuziva ngathi kufana nesono.
Ngumdlalo weroulette wothando
kwaye umpu ulayishwe ngokupheleleyo.
Indlela ukuthanda ngayo oyena mhlobo usenyongweni kukuzibulala ngobuhlobo
Ngale ndlela ndiza kuqinisekisa ukuba iyabonisa.
Ndikwenza oku ngalo lonke ixesha
Ndidibanise izinto kwakhona
Konke kuba ndikuthandile
Ukuwa eluthandweni kunokuba yenye yezona mvakalelo zilungileyo.
Kukho inkqubo yokwenyani yemichiza eyenzeka emntwini othandana naye.
Zonke izivamvo zinamandla amakhulu.
Imibala ibonakala ikhanya ngakumbi, isandi sivakala ngakumbi, kwaye sinuka ngakumbi xa sithandana.
Xa ukunye nesithandwa sakho akukho luvo lukhulu ngaphakathi el mundo kwaye xa ungekho uchitha lonke ixesha lakho ucinga ngomnye nomnye.
Ukuwa eluthandweni yimvakalelo engakholelekiyo.
Kutheni ndikhethe wena
Ukungazinzisi xa kufikwa kuthando
Ndisoloko ndizijongela phantsi.
Ndihlala ndizama ukuzihlazisa
Kodwa xa kufikwa kuthando lokwenene
Ndiyazi ukuba kuphelelwe ngumbuzo ukundibuza.
Umbongo malunga nokuwela umntu olungileyo
Iinzwane zam zixhonywe ecaleni
Umoya uvuthuza kamnandi
Iinwele zam ziyakha
Xa uthando luqala
Bendihlala ndisazi ukuba uthando luyakuza lundifuna ngenye imini
Kodwa andizange ndiyazi ukuba iya kuba nguwe ohamba ngendlela yam
Undithathe ndothuka wandithatha nam ndothuka
Kodwa yandithimba nje ngendlela efanayo xa ndijonga amehlo akho
Kuyinyani ukuba sonke isipho esilungileyo nesigqibeleleyo sivela phezulu
thaca kum njengesipho esipakishwe kakuhle sigcwele uburharha, italente, ubukrelekrele, ubuhle nothando
Ukususela xa uhleka kude kube xa unomsindo
Ndisazithanda izinto ezincinci ozenzayo.
ngakumbi ukuva uhleka kwaye ubona impumlo yakho imibimbi ngendlela efanayo neyam
Ukungena kobu budlelwane bekunzima ngamanye amaxesha, kodwa siphumelele.
Ndiyazi ukuba okoko nje sikunye kolu hambo, akukho nto sinokuyenza.
Ngamanye amaxesha ndiye ndizibuze ukuba into esinayo intle kakhulu ukuba ayinakuba yinyani
Ndiyoyika ukophula intliziyo yam kwaye ndiyoyika ukucinga ngokulahlekelwa nguwe,
kodwa ekugqibeleni, ndiyamthemba umbhali kunye nomphelelisi wento endiyikholelwayo
kuba oko sikucelayo kuye siya kukubuyekeza.
Le yindlela ahamba ngayo amazwi awunokwazi ukuba ingomso lingantoni na, kuba nguThixo kuphela owaziyo
into endiyaziyo kukuba nguwe wedwa, ubutyebi entliziyweni yam endifuna ukubunikela ngokupheleleyo ubomi bam bonke.
Ndiyazi ukuba akukho mfuneko yokuba ndibonise iimvakalelo zam ukuze ndazi ukuba ziyinyani
kuba endikwaziyo kwixa elidlulileyo akusondelanga kumava.
Ndinamava okulala ngesondo ngaphambili
kodwa ke eli lixesha lokuqala ukonwaba kwam… andinakho ukubuza enye into.
Kuliwonga ukwazi ukuba ndingowakho kuba ungowam
kwaye ndiyamthemba uThixo ukuba asidibanise ngexesha lakhe elihle.
Okwangoku ndiza kuwulinda ngomonde loo mhla xa sikunye
loo mzuzu uxabisekileyo ngexesha xa ndiza kuthi "nguwe ndifuna ukuba naphakade"
Zonke izinto uzenze zantle, zaxabiseka, zintsha, zakhangeleka zinjalo njengoko imini iya kuba njalo.
Xa ndijonga emehlweni abo kwaye ndithi, "Ndiyakuthanda."
Mamela intliziyo yam njengoko ibiza igama lakho.
Ndijonge emehlweni ngelixa ulungisa iintlungu.
Yanga imilebe yam kwaye siza kunyamalala.
Singabaleka simke apha.
Hlala nam ungaze undiyeke ndihambe.
Bona yonke imizuzwana ukuba uthando lwam kuwe luyakhula.
Beka isandla sakho ngobunono ebusweni bam
Njengokuba ndibeka owam esinqeni
Khala iinyembezi zakho ke mandizosule.
Ndixelele uyoyika kwaye ndiza kugcina usuku lwakho
Iividiyo zemibongo zokwenza umhlobo athande uthando